ကမ္ဘာကြီးကို အအေးခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ တာဝန်ထမ်းပေးနေသော အာတိတ်သမုဒ္ဒရာကြီး အနားယူချိန်ရောက်လာပြီးလား? – Sunthit Myanmar
ကမ္ဘာကြီးကို အအေးခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ တာဝန်ထမ်းပေးနေသော အာတိတ်သမုဒ္ဒရာကြီး အနားယူချိန်ရောက်လာပြီးလား?
အာတိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးသည် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲကာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပူနွေးလာပါတယ်။ အရင်အချိန်တွေကလို အေးခဲတဲ့ နေရာဒေသကို ပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်ပဲ ယခုအနေအထားသည် ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ အနေအထားသစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နယူးအော်လင်းမြို့တွင် အမေရိကန် ဘူမိရူပဗေဒသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးပွဲတစ်ခုကျင့်ပခဲ့ပါတယ်။အထက်ပါအကြောင်းအရာကို အမေရိကန် အမျိုးသားသမုဒ္ဒရာနှင့် လေထုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာတိတ်သမုဒ္ဒရာဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သမုဒ္ဒရာ နှင့် လေထုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာတိတ်သုတေသန အစီစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ဂျရေမီမက်သစ်က အာတိတ်ဒေသဟာ အအေးခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ ကမ္ဘာကြီးကို ကြီးမားသောဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် မိမိတို့က ပွင့်နေသော အအေးခန်းတံခါးမှ ထွက်ခွါခဲ့ရပြီးလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နယူးအောင်လန်မြို့တွင် သမုဒ္ဒရာနှင့် လေထုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ Noaa က အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်ချက်ကို ယခုလိုမျိုးတင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။
Published December 14, 2017 By weihtun
Categorized as News Tagged ကမာၻႀကီးကို အေအးခန္းတစ္ခုကဲ႔သို႔ တာ၀န္ထမ္းေပးေနေသာ အာတိတ္သမုဒၵရာႀကီး အနားယူခ်ိန္ေရာက္လာၿပီးလား
သွားတိုက်ဆေးဖြင့် အမဲရောင်ဝက်ခြံပုန်းတွေကို ဖယ်ရှားမယ်။